मेरा आखाहरुले रोई सकेछन अझै पनि मनले बोल्न सकिन
by Krishna KC | Updated: 29 Jun 2019
-अखिलेश कृष्ण र विनोद रोका
विनोद रोका, न्युर्योक/६/२९/१९
मैले पनि होईन मेरा आखाहरुले तिम्रा लागि रोईसकेछन। धेरै पहिलेदेखि बच्चुकैलाशले गाएको यो सदाबहार गीत सुन्दै आएको छु। यस्मा छेत्र प्रताप अधिकारीका शव्द र नातीकाजीको संगीत रहेको छ। यो गितले एउटा पुरुष र महिलाका बिचमा हुने भावनात्मक सम्वन्धको गहिराईलाई छोएको महसुस हुन्थ्यो। अनि म पात्रले नरोइकन आखाले मात्रै कसरी रोए होलान ? भन्ने प्रश्न मनमा उठथे शव्दको अर्थ गर्न खोज्दा। तर ती गीतका हरफहरुले मलाई आज अर्कै अर्थ दिईरहेका थिए। जब राकेशजीले जुन ११, २०१९ का दिन विहानै भर्ने दादा अब अखिलेशजी नहिरहे।
मैले आफनै आखाहरु आज अनायास रोएको देखे। म भने यी आखाहरुबाट बहदै गरेका आशुहरु हेरिरहेको थिए। मेरो घाटीबाट रुवाईको चित्कार निस्कन खोजि रहेको थियो। मैले केहीबेर सम्म हेरिरहे साक्षीभावले आफनै वर्तमान अवस्थालाई। करिब १९ बर्षदेखि मेरा पांच ईन्दीयहरुले ऊनीसंग बिताएका पलहरुलाई शरिरका विभिन्न कोशहरुमा रेकर्ड गरेर राखेका रशहरु आखाबाट बहदै थिए। यी वेदनाका रशहरुको अनुभुती दुखदायी भएर पनि पिडा भने मिठो दिईरहेका थिए। प्रशव वेदनाको बेलामा युवतीले सहवासको क्षणको पनि अनुभव गरेम। ताकि फेरी पनि यस्तो प्रकृया दोहोरियोस। उत्ताबाट राकेशजी रुदै भन्दैथिए- दादा आपनेको सम्हालो। म राकेशलाई भन्न खोजि रहेको थिए। मै तो ठिक हुं आप अपनेको सम्हालो, तर मेरो आवाज निस्कीरहेको थिएन। आखाहरु भने अफै रोई रहेकै थिए।
अखिलेश कृष्ण पेशाले वकिल हुन। उनी नयादिल्लीबाट न्युर्योक आएका थिए। डिसेम्बर १०, १९६३ मा जन्मीएका एक्ला छोरा थिए। उनी त्यहा पनि वकिल, चार्टर एकाउण्टेण्ट, अनि जिटिभिमा समाचार बाचकको रुपमा काम पनि गर्दथे। उनका पिताजी प्रो डा सुरेशकृष्ण दिल्ली युनिर्भसिटीका पुर्विय दर्शन र हिन्दी साहित्यका प्राध्यापक, कवि, एवं विदेशी रेडियोका स्थानीय सम्वाददाता भएर काम गरी सकेका विद्धान हुन। र उनकी दिवंगत माताजी पनि त्यही प्राध्यापन गर्दथिन। पिताजीका साथमा रही ऊन्ले विदेशी रेडियोमा समाचार सम्पे्र्षणको काम पनि गरेका थिए।
उनी न्युर्योकको टुरोल कलेजको एलएलएमको अन्तीम बर्षमा अध्ययनरत रहदा म त्यहा विद्यार्थी हुन पुगेको थिए, सन १९९९ मा। छोटोकद र हसिलो मुहार भएका अखिलेशलाई अव्वासीले पण्डीतजी आप कै सै हो ? भनेर सम्वोधन गर्दथ्यो। जवाफमा उनी मुस्काउँदै भन्थे मै ठिक हु सर।
अखिलेश जैन परिवारबाट आएकोले लसुन र प्याज समेत नखाने साहाकारी थिए। नियमित रुपबाट पुजापाठ गर्दथे। उनी आफनो वकालतको साथै न्युर्योकको एउटा कलेजमा पार्टटाईम पढाउदथे पनि। यिन्लाई साहित्य, संगित र कला लगायतका विविध विद्यामा उत्तिकै दखल थियो। परिवार र साथीभाईलाई समस्या प-यो भने अखिलेशलाई सम्मझन्थे। उनी कृष्ण नै थिए। आर्दश पती, पिता, भाइ, अनि गोपीनीहरुका लागि सखा। यशोदाहरुका लागि कान्हा। बाहिर खान जानु प-यो भने साथीहरुले खादै गर्दा उनी क्रे्डिड कार्ट बोकेर काउण्टरमा पुग्दथे। उनी रक्सी पिउदैनथे। तर पिउनेहरुको पार्टीमा सामेल भै अरुलाई पिलाउथे। अनि रमाईलो बढी उनी गर्थे। पिउने अरु मात उन्लाई लाग्थ्यो।
आफनी एक्ली छोरी मिनाक्षीले नेपालका गरिब बाल बालिकाका, सोलुको विद्यालयमा छाना लगाउने प्रोजेक्ट, टेक्सास स्थित एचपिएनपी र कैन्सर रिसर्चको सहयोगार्थ प्रत्येक बर्ष फण्ड रेजिंगका लागि आयोजना गर्ने कार्यक्रममा उनी श्रीमती डा कल्पनाका साथ सकृयतापुर्वक सहभागी हुन्थे। कार्यक्रममा हार्वभर, पेन, स्टानफर्ड, ऐल, लगायतका कलेजहरुमा पढने भारतीय मुलका विद्यार्थीहरु सहभागी हुन्थे।
मिनाक्षीले नेपालका लागि संकलन गरेको सहयोग कवि दिनेश अधिकारी, तत्कालीन सचिव समाजकल्याण मन्त्रालय र म मार्फत नेपाल पठाईएकी छन। मिनाक्षीले हार्डवरबाट स्नातक पुरा गरिन र हाल कोलम्वीयामा पढदैछिन। अहिले पनि नेपाललाई सहयोग गर्ने भाव उनीमा छ।
अखिलेशको वहुआयामीक व्यक्तित्वका बारेमा लेखेर सकिदैन। त्यसैले केही अविस्मरणिय कुराहरु टिपोट गर्नु उचित हुन्छ।
उनी मेरो अफिसमा अफ काउन्सीलको रुपमा आई रहन्थे। मन खोलेर हास्नु प-यो भने। भाषा र अन्य जटिल समस्या अयो भने म न्को सहयोग लिने गर्दथे। एनआरएनए अमेरीकाको २०१४ को निर्वाचनको लागि मैले खटेको देखेर उन्ले भने, आपको पैसे मिल्ते है क्या ? मैले भने। नहि सर। फेरी उन्ले सोधे क्यु यीत्ने लोग उम्मेदवार बन रहे है ? मैले भने, सर पद पाने के लिए। फेरी सोधे, पद के सिवाय और क्या मिलता है ? मैले भने कुछ नहि ?। उन्ले भने हमारे भी है एनआरआई मगर यीस तरह से चुनाव नहि होते है। अनि मैले उन्लाई भन्थे, सर प्लिज हेल्प मि टृ ड्राफट दिस नोटीस। अनि उनी मलाई सघाऊन थाल्दथे।
अखिलेशले मलाई अद्यागमन सम्वन्धि अपठयारो परेका मान्छेका काम पठाऊथे। पैसा आफनै अफिसको चेकबाट दिन्थे। मलाई लाग्थ्यो उन्ले क्लाईन्टबाट पैसा लिएका होलान। तर पछि थाहा पाउथे उन्ले कतिपय क्लाईन्टबाट पैसा लिएका हुदैनथे। किनकि तिनीहरु असमर्थ पक्ष थिए रे। मैले पनि कतिपय कामहरु उन्लाई पठाउथे। तर ऊनी अतपत पैसा लिन मान्दैनथे। भन्थे रख लो दादा बादमे देखेेगे।
म करिब दुई महिना अगाडी उन्लाई घरमा भेटन गएको थिए, मेनुका, प्रभात र परिता पनि संगै थिए। हिडने बेलामा मलाई उन्ले एउटा चेक दिए। त्यो चेक मैले उन्लाई निकै अगाडी दिएको थिए एउटा काम गरे वापतमा। उन्ले भने दादा ऐ चेक रखलो। अखिलेश र मेरो बिचमा भएको कारोबारको बारेमा थाहा पाएका एकजना मित्रले उन्को मृत्युको खवर सुनेर सोधे। व्यवहार त मिलेको थियो होला नी ?
अखिलेश, उन्का पिताजी र छोरी मिनाक्षीको कविता बाचन हामीले श्रृजनाका यात्राहरुमा गराएका थियौ, न्युर्योकको ज्याक्सन हाइटमा। पिताजीबाट साहित्य र दर्शनका बारेमा शहदेवभाई र मैले धेरै प्रश्नहरु पनि राखेका थियौ। प्रदिप थापाजी र मैले पिताजीसंग साहित्य र दर्शनका बारेमा मेरै अफिसमा सम्वाद गरेका थियौ। यस्को जोहो मिलाऊने अखिलेशनै थिए।
अखिलेशले लंगआइलेण्डमा फेरी अर्को नया घर किने। मलाई त्यो घरमा आउन उन्ले कर गरि रहेका थिए। उनी भन्थे दादा, मेनुकाजी ओर आप आजाओ विकेण्डम। स्वीमिंग करो, ध्यान करो, बागमे सैर करो। बहुत अच्छी जगह है। उन्लाई थाहा थियो म ड्रईभ गर्दिन भनेर। त्यसैले उनी भन्थे, गाडीवाले और एक कपलको भी साथमे लेके आयो। बहुत कमरे है। तर म जान सकि रहेको थिइन।
अखिलेशजीले एकदिन भने पिताजी आए है क्यालिफोर्नियासे। कुछ समय यही रहेंगे। ८५ बर्ष नाघि सकेका अस्वस्थ पिताजी न्युर्योकको मौसमको कारणले गर्दा छोरी रिजुसंंग क्यालिफोर्निया नै बस्नु हुन्छ। मलाई पिताजीसंग साहित्य र दर्शनका बारेमा केही सत्संघ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जिज्ञासा आयो। मैले आफनो भाव अखिलेशजीलाई व्यक्त गरे। उन्ले मलाई कहिले र कतिजना आउने जानकारी गराउ भने। मैले अनेसास, न्युर्योकका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसंग केही नामहरु मागे। मेनुका, म, राजेन्द्र, डा तारा निरौला, डा गोविन्द कोईराला, राम र गीता खत्री, शकुन, परिता, प्रभात, हजुरी अन्य केही साथीहरु अखिलेशजीको घरमा शनिवारका दिन गयौ।
हामीलाई पिताजी, अखिलेश, भाउजु, मिनाक्षी र अन्य परिवारका सदस्यले स्वागत गर्नु भो। उन्को यो नया घर फिल्म स्टुडियो खालको छ। जंगल भित्र एकान्तमा। घर, घर वरिपरीको रमणिय वातावरण हेरेर हामी मोहित भयौ। सबै जना फोटो खिच्न र खिचाऊन थाले। त्यसपछि हामी कार्यक्रम हुने र खाने कुराहरु सजाएको ठाउमा गयौ। मिठाई र खानाका परिकारहरु देखेर हामी छक्क परयौ। एकपछि अर्को परिकारहरु अखिलेश, भाउजु मिनाक्षीहरु ल्याईरहेका थिए। मानौ हामी कुनै साही भोजमा छौ। मलाई सहभागीहरु सोध्दै थिए, हैन दाई यो तपाईको साथी त ठुलो दिलवाला रहेछ। मैले आफुलाई कृष्णको घरमा पुगेको सुदामा जस्तो अनुभव गरे।
पिताजीसंग गरिएका सत्संघको फोटो र भिडियो परिता र प्रभातले लिए। पिताजीले साहित्य, दर्शन र धर्मको बारेमा दिएका जानकारी पछि हामीहरुले उहासंग धेरै प्रश्नहरु राख्यौ। तीनका उत्तरहरु पनि पायौ। पिताजीसंग भएका सत्संघको भिडियोलाई सम्पादन गरेर निकाल्नका लागि अखिलेशजी र म काम गर्दै थियौ। जुन पुरा भएन। आशा छ निकट भविष्यमा म निकाल्नेछु।
अखिलेशजी नियमित रुपले डाक्टरकहा गै रहने। पथ परहेजमा रहने मान्छे हुन। करिब १६ महिना अगाडी अफिसमा काम गरि रहेका बेला उन्लाई घरमा बोलाइएछ। उनी पुग्दा डाक्टर र परिवारका सदस्यहरुले रुदै भनेछन। उन्लाई पेनक्रियाजको क्यान्सर भएछ। अनि उन्को उपचार सुरु भयो। मलाई उन्ले सुरुमै भनेका थिए यी कुराहरु। तर मलाई उन्ले भने दादा मेनुकाजीको ए बात मत बताना। अखिलेशलाई थाहा थियो मेनुकाले अनावस्यक पिर लिन्छीन भन्ने।
म अप्रिलको ३, २०१९ का दिन हिडे नेपाल बालगुरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन। जानु भन्दा केही दिन अगाडी उनीसंग कुरा भयो। एउटा प्रसंगमा उन्ले भने दादा बहुत लोगो को ए भी पता नही है कि उन्के मृत्यु कब होगी। मगर डाक्टर ने कह दिया है मै कब तक जिन्दा रहुंगा। मै तो निस्चित हु उसके आगे नहि मरुंगा। वहिनी रिजुलाई ऊन्ले भन्थे रे, भगवानने मेरे लिए अधुरे काम पुरा करने के लिए समय दिया है।
अखिलेशले भनेका यी भनाईले मलाई आजभन्दा करिब ३५ बर्ष अगाडी मृत्यु भएका मेरा सहकर्मी मित्रलाई सम्मझीए। उनी करिब २५ बर्षको उमेरमा वितेका थिए। उन्को मृत्युले ममा एऊटा भय पस्यो। मृत्युदेखि डर लाग्न थाल्यो। अनि म चिन्तामा डुव्न थाले। डाक्टर र वैद्यको दवाईले काम गरेन। सबैले मलाई डिप्रेशनमा छ भने। तर म पत्याउदिनथे। अनि म आजीत भएर विपश्ना ध्यानमा गए १९९४ मा।
त्यसपछिको निरन्तरको सत्संघले म मा एउटा पराभौतीक ज्ञान पस्यो। म मन, बुद्धि, र शरिर होईन। म चैतन्यस्वरुप आत्मा हु। म न त जन्मन्छु नत मर्दछु। मर्ने त केवल मेरो शरिर हो। म जागृत, स्वप्न, सुसुप्ती अवस्था भन्दा माथी रहेको। यी तीनै अवस्थालाई जान्ने साक्षी हु।
अखिलेशले मृत्युलाई यसरी सहज रुपबाट स्वीकारेको सुनेर म फेरी मृत्युबाट निर्भय भए। ममा वैदीक साहित्य प्रतिको श्रद्धा र विस्वास अझ बढयो। अनि मैले भरखरै आफनै रचना र संगीतमा रेर्कड गरेको तलको गीत सम्मझीए।
जन्मने र मर्ने, म हु कि? मेरो शरिर?
गुरुजी् हटाई पाऊ, यो मनको पीर।
पन्छाइ एकछिन बुद्धिका कुरा
तिम्रो चेतना हौ् कुनै वस्नु होईनौ
तिमी सर्वत्र छौ्, शरिर होईनौ।
सास्वत छ चेतना शरिर नासिन्छ
अज्ञानी तिम्रो मन, शरिरमा टासिन्छ।
न मर्दर्छाै तिमि, न मर्छन अरु
तिम्रो अज्ञान डढाऊ, बनाई चरु।
नेपाल रेडक्रसको कर्मचारी कल्याण कोषले आफ्नो ४० औँ वर्षगाँठ सम्पन्न गरेको छ
चिनियाँ कम्पनीले बनाउने फिल्ममा रेश मरहट्टा मुख्य भूमिकामा खेल्दै
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था को युएस शाखाको प्रथम बार्षिक सम्मेलनसम्पन्न
अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिचाल प्रतियोगिताको उपाधि नेपालका कृष्ण थापालाइ
चीनले पनि नेपालको ३६ हेक्टर भूभाग मिचेको भन्दै ठमेलमा जुलुस
करेन्ट लागेर दुईजना कामदारको मृत्यु
कीर्तिपुरमा एक पुरुषको शव फेला
निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि ६० वर्ष हुने
पर्यटकलाई बन्धक बनाएर लुट्ने ८ जना पक्राउ परे
न्यूयोर्कमा वर्ल्ड नेपाली म्युजिक अवार्ड २०१९ भब्य बनाउने तयारी, समितिहरु गठन
NRNA:एनआरएनएमा नयाँ मर्यादाक्रम सार्वजनिक
खानेपानी संस्थानलाई मन्त्रीको निर्देशन:आफ्नो क्षमता बढाएर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु
सौताले गरिन धारिलो हतियार प्रहार गरी सौताको हत्या
ऋतिक रोशनको फ्यान भएकै कारण हत्या
दरबारमार्गमा सामूहिक बलात्कार गर्ने अभियुक्तलाई ५ वर्ष कैद
प्रधानमन्त्री ओली र बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदबीच भेटवार्ता
बिधार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ
३ लाख ६० हजार रुपैयाँ सहित् १० जना जुवाडे पक्राउ
विद्यार्थीहरुद्वारा भारतीय दुतावास अगाडी प्रदर्शन
बंगलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद भेटघाटमा ब्यस्त
अपराधको दुनियाँमा इमेल फिसिङ ∶ ठगी गर्ने नयाँ तरिका
माछा मार्ने क्रममा करेन्ट लागेर एक युवतीको मृत्यु
​​​​​फ्रान्सेली नागरिकको सगरमाथा क्षेत्रमा मृत्यु
आगलागी हुँदा दुई घर जले
महिला कर्मचारी कुट्ने वडाध्यक्ष हिरासतमा :पाँच दिनको म्याद थप
आज स्थानीय तह उपनिर्वाचनको मनोनयन दर्ता हुँदै
शिल्पाको रिट खारेज∶पक्राउगरि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्यो
राष्ट्रियताका विषयमा देश एक ढिक्का: अध्यक्ष प्रचण्ड
पोखरामा मर्दी खोला खानेपानी आयोजनाको काम धमाधम अघि बढ्दै
डा. गोविन्द केसीको १७औं अनशन स्थगित
भद्रपुर विमानस्थल १० दिनका लागि बन्द
बंगलादेशका राष्ट्रपति हमिदलाइ काठमाडौंमा भब्य स्वागत
फेरी काठको खोरमा पर्यो चितुवा !भानुबासिलाई राहत
लता मंगेशकर आईसीयूमा !स्वास्थ्य स्थिर
बंगादेशका राष्ट्रपति हमिद नेपाल आउँदै
NRNA:केन्द्रीय तहमा रही योगदान गर्न सक्ने व्यक्तिलाई आइसीसी सदस्य मनोनयन गर्ने
प्रदेश २ सरकारले दलितलाइ रासन कार्ड दिने
चारदेशका राजदूतद्वारा राष्ट्रपति समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश
सिन्धुली गढीमा गढी दरवार र युद्धकला संग्रहालय बन्ने
सडक छेउमा राखिएको बसमा आगजनी
नेकपाको बैठकले क-कसलाई दियो जिम्मेवारी(सूचीसहित)